Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba » UVienna ugqiba kwelokuba agcine usodolophu owuthandayo uAdolf Hitler
Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UVienna ugqiba kwelokuba agcine usodolophu owuthandayo uAdolf Hitler.
Ebizwa ngokuba 'yinkosi yaseVienna', uLueger wahlanganisa abantu ngokuchasene namaYuda, ebachaza "njengabantu ababulala uThixo" kunye "nabahlutha abemi bomthonyama."
Ipolitiki kaSodolophu uKarl Lueger kuthiwa yaphefumlela uAdolf Hitler.
Urhulumente waseVienna uthe kuyakusungulwa inkqubo yeminyaka emibini yokuphinda kulungiswe umfanekiso oqingqiweyo kasakuba nguSodolophu uKarl Lueger.
Isigqibo sokugcina umfanekiso oqingqiweyo kaLueger silandele iingxoxo nabachaphazelekayo besixeko malunga nendlela yokujongana nelifa likasodolophu eliphikisanayo.
Urhulumente wedolophu elikomkhulu lase-Austrian eVienna uye wakhaba isicelo sokususa umfanekiso oqingqiweyo kasodolophu waseVienna owayesakuba nguSodolophu uKarl Lueger, ozimvo zakhe zoluntu kwakusithiwa zikhuthaze uzwilakhe wamaNazi. Adolf Hitler.
Endaweni yokususa ilitye lesikhumbuzo, Vienna'usodolophu ophetheyo, uMichael Ludwig, uthe uthanda inkqubo 'yokuhlengahlengiswa kwezobugcisa.'
Urhulumente waseVienna ubhengeze ukuba inkqubo yeminyaka emibini iya kuqaliswa ukuphinda kuguqulwe umfanekiso oqingqiweyo walowo wayesakuba nguSodolophu uKarl Lueger. Ukuba umfanekiso oqingqiweyo uya kujongwa njani na emva 'kwemeko yokuguqulwa' kusaza kubonwa, njengoko uthethwano kunye nethenda kusaza kusungulwa.
Isigqibo sokugcina umfanekiso oqingqiweyo kaLueger, owayelawula ikomkhulu lase-Austrian ukususela ngowe-1897 ukuya kowe-1910, salandela iingxoxo nabachaphazelekayo besixeko malunga nendlela yokujongana nelifa eliphikisana nosodolophu.
Current Vienna USodolophu uMichael Ludwig ulindele ukuba le projekthi ayizuqukunjelwa kude kube ngu-2023, eqaphela ukuba ithenda iya kumiselwa ngokuvela kwalo mfanekiso kwixesha elizayo. Uthe iprojekthi ephumeleleyo iya kunikwa ibhaso ngu- "udidi oluphezulu" abagwebi. Akukho hlahlo lwabiwo-mali lwabelwe iprojekthi, kwaye akucaci ukuba ithenda iya kuvulelwa okanye iya kuvulelwa kuphela abo bakhuphisana nabo abamenyiweyo.
Kubhalwe igama elithi 'king of Vienna', uLueger wahlanganisa abantu nxamnye namaYuda, ewachaza "njengabantu ababulala uThixo" kunye "nabaphangi bomthonyama."
Inkokeli yamaNazi Adolf Hitler, owachitha iminyaka emithathu kwikomkhulu lase-Austrian ngelixa uLueger wayephethe, wachaza usodolophu "njengoyena sodolophu woyikekayo waseJamani ngalo lonke ixesha" kwi-autobiographical manifesto yakhe 'Mein Kampf'.
I-Austria kudala izama ukujongana nelifa likaLueger. Ngaphandle kokuqamba enye yezona zitrato zibalaseleyo - ezazibizwa ngokuba yiKarl Lueger Ring - ngo-2012, icawa, isikwere, ibhulorho, iiplagi ezintathu, kunye nomfanekiso oqingqiweyo we-13ft usahleli kwimbeko yakhe.